Kulanka Golaah Shacabka ee BFS oo goordhow furmay – Kalfadhi
Kulanka Golaah Shacabka ee BFS oo goordhow furmay
April 24, 2019 Kalfadhi
Waxaa goordhow Xarunta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ka furmay fadhiga Xildhibaanada Golaha Shacabka oo aad uga dib dhacay waqtigoo loo balansanaa inuu qabsoomo. Muddo kabadan 4 Saac ayuu dib u dhacay furitaanka Kulanka Xildhibaanada kadib markii ay soo xaadiri waayeen Xildhibaanada sida uu ku soo waramayo Wariyaha Kalfadhi ee Golaha Shacabka.
Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Shacabka Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey ayaa shir Guddoominaya fadhiga Golaha Shacabka waxaana Warbixin looga dhageysanayaa Guddiga madaxabanaan ee Xuduudaha dalka iyo Soodimaha maamul Gobaleedyada.
Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudeey ayaa Xarunta fadhiyada Baarlamaanka ee Golaha Shacabka ka sheegay in uu aad uga xun yahay soo daahitaanka Xildhibaanada iyo in aan mas’uuliyad la iska saarin dhowridda Waqtiga waxa uuna kadib ku dhawaaqay in uu furan yahay Kulanka Golaha Shacabka.
Waxaa intaasi kadib bilaawday dhageysiga Warbixinta 4 biloodlaha ah ee Guddiga madaxabanaan ee Xuduudaha Soomaaliya, kuwaas oo afartii bilba mar hortaga Baarlamaanka. Markii ay hadlaan kadib waxaa lagu wadaa in su’aalo laga waydiiyo Caqabadaha ku horgudban iyo waxyaabihii u qabsoomay.
Golaha Shacabka ee BFS oo maanta Warbixin ka dhageysanaya Guddiga Xuduudaha Soomaaliya
Guddiga Xuduudaha Soomaaliya oo xaqiijiyay in Kenya gudaha Soomaaliya u soo gashay dhul ballaaran.